गफ ! .....: दशैंको कुरा
'दशैं पनि आइहाल्यो है ?' फोनमा कुरा गर्दा एउटा भाइले भन्यो ।
'अँ त दशैं गै हाल्यो ।' मैले भनें ।
'गै हाल्यो ? के भन्नुहुन्छ ? आएकै छैन ।' उ जिल खायो ।
'ल, अहिले आइहाल्यो भन्दैथियौ । अहिले आएकै छैन भन्न थाल्यौ । तिमी ठिक त छौ ?' म उसलाई जिस्क्याउन लागेँ ।
'होइन दशैं आउन लागेको छ नि त । त्यसैले भनेको...' उ स्पस्ट पार्न खोज्दैथियो ।
'त्यसो भए आउन लागेको छ अथवा आउन लाग्यो भनन त । आइहाल्यो भन्छौ ।' मैले खेदें उसलाई ।
'अनि आउन लागेकोलाई आइहाल्यो त भनिन्छ नि । मैले गल्ति गरें र ? बरु तपाईं पो आइनसकेकोलाई गै हाल्यो भन्नुहुँदैछ । तपाईं गलत हुनुहुन्छ बरु । '
'तिमीले गल्ति गर्यौ त कहाँ भनेको छु र मैले ? गलत मै छु होला तर...' सम्झाउन खोज्दैथिएँ म उसलाई ।
'अनि के त ? आउनै नपाएको दशैं कसरी गै हाल्यो ?' दिक्क लागेछ क्यार उसलाई उ झम्टियो म माथी ।
'दशैंको कस्तो हिसाब छ हँ तिम्रो ? दशैं त सकिन लागिसक्यो नि । केटाकेटीले झैं टिका लगाउने दिनलाई मात्र दशैं त भन्दैनौ होला तिमी ।' म उसैगरी पछि लागेँ उसको ।
'मैले त टिकाकै दिनलाई भनेको । त्यै दिन त यसो रमाईलो गरिन्छ । छुट्टि हुन्छ । अरु दिनको त के कुरा ?' ईमान्दारी देखायो उसले ।
'त्यसो भए टिका भनन त ।' मैले नै बेईमान बन्ने निधो गरें, रमाईलो जो गर्नुथियो उसँग, 'दशैंको बिचमा घरि दशैं आइहाल्यो भन्छौ, घरि आउन लागेको छ भन्छौ । मलाई अलमल्ल पार्यौ नि त ।'
'ल ल, टिका नि त टिका । टिका आइहाल्यो , भयो अब ? तपाईंकै कुरा माथी ।' उ दिग्दारियो ।
'मैले मेरो कुरा माथी तिम्रो कुरा तल भन्न खोजेको पनि हैन ।' म हाँस्न थालिसकेको थिएँ , 'मैले त खाली दशैं गैहाल्यो मात्र भनेको । तिमि नै त हो घरी आइहाल्यो भन्ने , घरी आएकै छैन भन्ने ।'
'ल दाइ ल , जे सुकै होस् । तपाईंलाई दशैंको शुभकामना ! पछि कुरा गरुँला ।' उ पन्छिन चाह्यो ।
'आइहाल्यो दशैंको कि गैहाल्यो दशैंको शुभकामना हो ?' मैले अल्झाउन चाहेँ ।
'भयो बाबा भयो । कान समातें मैले । आइहाल्योको भन्नुस् कि गैहाल्योको भन्नुस् । दशैंको हो शुभकामना । मैले फोन राखेँ ।' भाइले भन्यो ।
फेरी हासेँ म, 'तिमीलाई पनि शुभकामना दशैंको ।' मैले चाहेर किन अल्झिन्थ्यो उ, मैले भनिसक्न नभ्याउंदै उसले फोन राख्यो । म आफ्नै तालमा मुस्कुराउँदै उ झिँजिएको कल्पना गर्न थालेँ । उसले भन्यो होला, 'पागल भएछ यो दाइ त । के दिनमा फोन गरेछु ।' मलाई भने रमाईलो लागिरहयो । निक्कैबेर मुस्कुराईरहेँ म ।
त्यसो त म उसँग जिस्किरहेको मात्र थिएँ तरपनि सोचें - 'दशैंको माझबाट दशैं गैहाल्यो भन्दा चैं गल्ति हुने रे दशैं आइहाल्यो भन्दा चैं नहुने रे ! किन होला ?' दशैंलाई अस्तिनै घटस्थापनाका दिनदेखि पछि टिका जाने पूर्णिमासम्म मान्ने हो भने यतिबेला भन्दा दशैं आएको छ भन्नुपर्ने । आइहाल्यो भनेर आउन लागेको अवस्थालाई भन्ने गरिन्छ र त्यही अवस्था जानलागेको पनि त हुन्छ तर गैहाल्यो चैं भन्न नमिल्ने रे । दशमीका दिनमा टिका टाँसीसकेपछि चैं दशैं गैहाल्यो भन्न थालिन्छ मानौं टिका टाँस्न मात्रै आएको थियो दशैं । दशैंको माझबाट दशैं आइहाल्यो, त्यो पनि आउन लागेको अवस्थालाई मानेर, भनिन्छ - कति अप्ठ्यारो ? तर कति सजिलै बुझ्दा रहेछौं हामी ।
खासमा यतिबेला दशैं आएको छ नै भन्नुपर्ने (जस्तो लाग्यो मलाई) अथवा आइहाल्यो भनिनु आउन लागेको अवस्थालाई नभएर आएर नसकिइसकेको अवस्थालाई जनाउन भनिनु पर्ने । अझ 'दशैं पनि आईगयो है' समेत भनिन्छ त्यो पनि आउन लागेको अवस्थालाई नै बुझाउने गरेर । आइगयो चैं अझ आएर गै सकेको अवस्थालाई भनिनुपर्ने । केहिबेर म आफैं रन्थनिएँ । यि सामान्य कुराहरु हामी सजिलै बुझ्छौं । भनिएको कुरा सहि छ कि गलत छ तिर हामी ध्यान दिंदैनौं । लाग्यो - 'यहि नै रहेछ हाम्रो जिउने कला । एक अर्कालाई बुझ्ने र स्विकार्ने कला जहाँ धेरै असंगतीहरुलाई बेवास्ता गरेरै हामी जीवनको सौंदर्य अंगालीरहेका हुँदारहेछौं ।'
जे होस् - यो माथापच्ची बिसाउँदै तपाईंहरु सबैलाई बडा दशैंको हार्दिक मंगलमय शुभकामना !
Posted by दीपक जडित at 3:11 AM
Happy Dashain! May this bring happiness, good health and prosperity in your life. May the blessings of Goddess Durga be always with you and your dear ones.
आइहाले नि दुईचार दिनमा गईहाल्ने हो... नै गैहाले नि फेरी आइ हाल्ने हो .... त्यसैले आइहाल्यो भन्नुस् कि गैहाल्यो भन्नुस् । जे भए नि मेरो नि दाइलाई दशैंको शुभकामना
आएर गएको पत्तै नहुने भएर होला नआऊँदै 'आयो' भन्ने गरेको।
जडितजी र यो ब्लगजका समस्त पाठकहरुमा दशैंको हार्दिक ममगलमय शुभकामना!
दशै आएर पनि अलिकति गैसक्यो नि :)
दीपकजी दशैको धेरै शुभकामना!!
विजया दशमीको हार्दिक मंगलमय शुभकामना । यो बडा दशै सँगै तपाइको जीवन सुख शान्ती र सम्बृद्धिले झलमल्ल होस
यो दशैँ के के न जस्तोगरी हामी आफैले ल्याउँछौँ र नै खुबै आएझैँ मान्छौ। सामान्य हेर्ने हो भने आउँछ अनि जान्छ। जे होस् दीपकजीसहित अन्य सम्पूर्ण ब्लगरमित्रहरुलाई दशैको शुभकामना।
दशैको सम्झनामा मन कतै घरतिरै हराइरहेको एकोहोरो समयमा तपाइको यो टासो खुब रमाइलो लाग्यो !
विजया दशमीको उपलक्ष्यमा दीपक जडित जी तथा यो ब्लगमा पाल्नु हुने सबै मित्रहरुमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु !
दिमाग रन्थन्याउने गरी विस्लेषण गर्नुभएछ । यो चाडबाड र रमाइलोमा मान्छे जातिले वित्थैमा हिसाब-किताब गरेर किन आफूलाई झिजो लगाउँदो हो, मुग्ध हुन छाडेर ।
जे-जस्तो भए पनि, भने पनि जे गुण चाडले लिएर आउँछ, त्यो दिएर जान्छ । हामीले अड्कल गरेअनुसार हुन्छ भन्ने के ठेगान ?
यहाँलाई पनि शुभ कामना बडादसैंको । साथै यस ब्लगमा झुल्किने अन्य मित्रहरूलाई पनि ।
गजल : मैले आफ्नो घाँटी राखेँ
गजल : रोकिएन समय